Nepali X Khabar: नजाने देखि अत्यन्त खतरनाक हुनसक्छ है हस्तमैथुनको लत !!!!’हस्तमैथुनमा रमाउनेहरु साबधान!!!!!
नजाने देखि अत्यन्त खतरनाक हुनसक्छ है हस्तमैथुनको लत !!!!’हस्तमैथुनमा रमाउनेहरु साबधान!!!!!
हस्तमैथुनमा रमाउनेहरु साबधान!!!!!
-के हस्तमैथुन प्राकृतिक क्रियाकलाप हो?
-के यसले हानी गर्दछ ?
-कति सम्म हस्त मैथुन गर्न सकिन्छ?
तपाई हामी मध्ये सबै जसोको उत्तर एस्तो हुनेछ।
-हो यो प्राकृतिक क्रियाकालाप हो।
-एसले कुनै पनि हानी गर्दैन।’
-मन लागेको र सकेको जती गर्दा हुन्छ।
आज हामी पुरुसहरुले गर्ने हस्तमैथुनको बिषयमा चर्चा गर्दैछौ।
अब लागौ बास्तबिकता तर्फ। सामान्यतया हामीले सुनेको पढेको येही नै हो। अझ नेपालका चलेका साप्ताहिक पत्रिकाहरु अनि केहि डाक्टरहरुले समेत हामीलाई बारम्बार येही सिकाउदै आएका छन्।एक प्रकारले हाम्रो मन,दिमागमै हस्तमैथुन सामान्य कुरा हो र मौका मिल्नसाथ जति पनि गरे हुन्छ भन्ने छाप परेको छ। खास भन्ने हो भने बास्तबिकता अर्कै छ।’
के हस्त मैथुन प्राकृतिक प्रक्रिया हो? अह हुदै होइन, सिधै सोच्दा यो प्राकृतिक जस्तै लाग्दछ। किनकि सेक्स अनि हस्तमैथुनको प्रक्रिया लगभग एकै प्रकार लाग्दछन। दुवै प्रक्रियामा लिङ्गको घर्सन अनि विर्य स्खलन हुने गर्दछ।तर उस्तै लागे पनि येस्मा हुने चरणहरु सुस्म तरिकाले हेर्यौ भने यो धेरै पृथक देखिन्छ। जब हामी उत्तेजित हुन्छौ तब हाम्रो मुटुले रक्त प्रबाह छिटो छिटो गर्दछ, सास छिटो छिटो अनि गहिरो हुन्छ। हाम्रो सरिरमा सामान्य बेलाको भन्दा १ .७ प्रतिसत बल उत्पन्न हुन्छ। त्यो प्रक्रिया खासमा सेक्स गर्दा प्रयोग हुनको लागि हो। तर जब हामी हस्तमैथुन गर्छौ, हामीले पुरा सरिरको बदला एउटा हातको बलबाट सम्पूर्ण क्रियाकालाप गर्दछौ। जसले हाम्रो बाकी सरिरमा तथा दिमाग स्नायुमा नकारात्मक असर पर्दछ। यो प्रक्रियामा हुने सक्तिको प्रयोग,विभिन्न अंग ग्रन्थि तथा हर्मोनमा हुने क्रियाकालाप तथा समय तालमेल बीच र प्राकृतिक सेक्समा हुने प्रक्रियामा हुने भन्दा नितान्त फरक तरिका हो.’
हस्तमैथुनका मुख्य मुख्य असर हरु
#Lower back pain- हस्त मैथुनले कालान्तरमा ढाड दुख्ने समस्या जन्माउछ।’
#Thinning hair / Hair Loss- विभिन्न अनुसन्धान अनि सर्वेले लगातार हस्तमैथुन गर्नेहरु चाडै तालुखुइले हुन सक्ने देखाएको छ।
#Weak Erection- धेरै हस्तमैथुन गर्नेहरुको लिङ्ग राम्रोसंग कडा नहुने समस्या देखियो। कतिको त बैबाहिक जीबन नै धरासाही हुने खतरा हुन्छ।
#Premature Ejaculation- हस्तमैथुनको लत परेकाहरुको सिघ्र पतन समस्या हुने गरेको पाइयो।
#Eye floaters or fuzzy vision- आखामा समस्या हुने ,कम देख्ने तथा धमिलो देख्ने समस्या पैदा गर्न सक्छ। यो गम्भीर प्रकृतिको तथा निको नहुने हुन सक्छ।’
#Groin / Testicular Pain-कम्मर तथा मांसपेसीहरुमा पिडा हुन सक्छ ,जसको कारण निन्द्रा नपरेर जीबन कस्टपूर्ण बन्न सक्छ.’
Pain or cramp in the pelvic cavity or/and tail bone-ढाडको सबै भन्दा तल रहने हड्डी (जहाँ जनावरको पुछार हुन्छ) मा मन्द किसिमको पिडा हुन सक्छ, जसले सामान्य दैनिक जीबन कस्टमय बनाउछ।’
तेत्ति मात्र होइनहस्त मैथुनले मनमा हिन भावनाको बिकाश गर्नको साथै स्मरण सक्ति पनि कम्जोर बनाउछ। अत्यधिक हस्तमैथुन गर्नाले सरिरमा अनाबस्यक हर्मोनहरुको उत्सर्जन हुन्छ। खास गरि कलेजोको कार्य प्रणालीमा प्रतक्ष असर गरि अन्य सरिरिक तथा मानसिक समस्या पैदा गर्न सक्छ! ‘dopamine, nor-epinephrine, epinephrine, and other hormones हरुको असामान्य उत्पादनले पुरुसत्वो गुम्ने खतरा समेत रहन्छ। parasympathetic nerve जसले विर्यलाई रोकेर राख्दछ, तेस्को कार्य प्रणालीमा असर हुने हुदा विर्य चुहावोट जस्ता समस्याको सिकार हुन सकिने हुन्छ। अझ अनुसन्धानमै रहे पनि कतिपय डाक्टर हरुले हस्त मैथुन धेरै गर्ने हरुलाई अन्डकोसको क्यान्सर हुन सक्ने खतरा देखाएका छन। र यो बिषयलाई चासोको साथ अनुसन्धान हुदै छ। हस्तमैथुनको अस्थाई असरहरु त हामीले आफै अनुभब पनि गरेकै हुनु पर्छ जस्तै घुडा दुख्नु,सरिर कम्जोर अनुभब हुनु ,दुब्लाउनु, फुस्रो अनुहार हुनु, धेरै तिर्खा लाग्नु, ओठ कालो हुनु।अत्यधिक हस्तमैथुन गरेकै कारण सरिरिक बनौट दाँया भाग वा बाँया भाग बिस्तारै टेढो,अमिल्दो,कुरुप हुनसक्ने कुरा त केहि वर्ष अगाडी नै प्रमाणित समेत भएको थियो!पिडितहरुले अत्यधिक हस्तमैथुन गर्ने गरेको स्वीकार गरेका थिए।
Posted by Lama Babu at 18:21